Ngoobani abahluphekileyo bamaSilamsi?
I-Sufi ilungu le-mystical, ascetic branch of Islam. I-Asceticism ithetha ukuphepha kwizinto ezinonophelo zehlabathi, ukuhlala ngokuzenzekelayo, nokugxininisa onke amandla akho ekuphuculeni ngokomoya. Ukuxhatshazwa kugxininisa amava akho kunye noThixo kunokugxila kwiimfundiso zabaphengululi bezenkolo zabantu. I-Sufis ingaba ngamalungu angamaSunni okanye amaShia ahlukeneyo ama-Islam, nangona ininzi i-Sunnis.
Amagama alandelayo kwi-Sufis afaka i-brasi e-non-politically correct or sting, kunye ne-tasawwuf. Igama elithi "sufi" mhlawumbi livela kwi- araf yesi- Araf ebonisa uboya, ngokubhekiselele kwiingubo zelinen ezigqithisileyo zoboya beeboya ezenza ukuba uSufis agqoke. I-Tasawwuf iphinda ivela kwingcambu efanayo ("sawwuf" yinto eguqukileyo ye "suf").
Kwezinye i-oda ze-Sufi, izenzo ezifana nokucula okanye ukujikeleza kwimijikelezo kunceda abaqeqeshi be-Sufi bafezekise isimo sendawo yesimo sezulu ukuze bafumane ubunye noThixo. Le mvelaphi yegama lesiNgesi elithi "ukukhwela." I-Sufis yendabuko yaziwa ngokuba yinto yokuphindaphinda amagama amaninzi kaThixo emva kwemithandazo yabo, isithethe esaziwa ngokuthi dhikr . Iindlela ezinjalo zeSufi zibhekwa njengezi-Islamic okanye zonyango ngamanye amacandelo angamaqumrhu angamaSulumane, abangavumiyo ingoma kunye nomdaniso njengezithintelo zonqulo. Ngaloo ndlela, i-Sufis iye yaqwalaselwa ixesha elide phakathi kwe "inkululeko" yama-Islamic order.
Njengazinye iinjongo ezifana nobuBuddha, injongo ekugqithiseleyo yobuSulumane kukukucima. Kuyi-intanethi epheleleyo yokuziphatha kwama-Islam kunye nokuqinisa ukholo lobuSilamsi. Injongo kukuza ku-Allah ngeli xesha lobomi, kunokuba ulinde emva kokufa ukuba sisondele kuye.
Ubuthathaka bube nokuphuhliswa njengento yokuphendula ngokuthanda izinto eziphathekayo kwiindlela ezithile zobuSulumane. Emva koko, uMprofeti yena ngokwakhe wayengumrhwebi ocebileyo, kwaye ngokungafani nokugwetywa kobuKristu ubutyebi, i-Islam ngokubanzi isekela urhwebo kunye nezorhwebo. Nangona kunjalo, amaSulumane okwezinto ezingokomoya ayenokwenzeka ukuba ayenze imikhuba ye-Sufi ngethuba lokuqala lika- Umayyad Caliphate (661 ukuya ku-750 CE) njengenye indlela yehlabathi yamaSulumane eqhutyelwa enkundleni.
Uninzi lwezibongo, iimvumi, kunye nabadlali behlabathi lamaSilamsi bebeSufis. Omnye umzekelo odumile ngumlobi, isazi semfundiso yenkolo kunye nommeli weJalal Ad-Din Muhammad Rumi wasePersia, eyaziwa ngokubanzi nje ngokuba nguRumi (1207 - 1273). URumi wayekholelwa ngokunyanisekileyo ukuba umculo, imbongo, kunye nomdaniso kunokukhokelela kuThixo; iimfundiso zakhe zanceda ukulungisa izenzo ze-dervishes. Iingoma zeRumi zihlala phakathi kweentengiso ezithengiswayo kwihlabathi, inxenye ngenxa yokuba ayikho isigwebo kunye neyonke. Umzekelo, nangona i-Qur'an yokunqanda utywala, uRumi wabhala eRubaiyat kuQuatrain 305, "Kule ndleleni yomcebisi, abantu abahlakaniphile kunye nezilumko bangomnye. / Ngothando lwakhe, abazalwana kunye nabantu abangaziwayo bayedwa. Othandekayo! / Ngaloo kholo, amaSulumane namahedeni ayingxenye. "
Izimfundiso zeSufi kunye neengqungquthela zinefuthe elikhulu kwezopolitiko kwiinkokheli zehlabathi zamaSilamsi, ngokunjalo. Omnye umzekelo ngu- Akbar Omkhulu waseMughal India , owayengumkhonzi weSufi. Wenza inkululeko enkulu ye-Islam, eyamvumela ukuba enze uxolo kunye nobuninzi bamaHindu ebusweni bakhe, nokwakha ityala elitsha kunye nelibandakanya apho kwakuyigugu lehlabathi langaphambili.
Yintoni eyayingu-Revolt yaseNdiya ka-1857?
Ubukhosi baseAkkadian: Ubukhosi bokuqala behlabathi
I-Elements Elements of Composition in Art
Iinyanga ezinde zenyanga
Iingcebiso kubaJuni abafuna ukudlala iKholeji yeKholeji
I-Ireland Vital Records - UkuBhaliswa koLuntu
Bike Rodeo Iziganeko
Imoji yeDorian iyahlolwa
UYesu kunye nabantwana - Inkcazo yeBhayibhile
Ikholeji yeZiko lezobuGcisa beeNkcazo
I-Shipstads kunye ne-Johnson Ice Follies
Yiyiphi iKaddish yeMourner kwiYuda?